Ungawabelana kanjani amafayela kunethiwekhi yeLinux | KusukaLinux | I-ChrisADR | Kusuka kuLinux
Ungawabelana kanjani amafayela kunethiwekhi yeLinux
UChrisADR | | I-GNU / Linux, Amanethiwekhi / Amaseva, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Le iya kozakwethu uClaudio, ofuna ukufunda ukumisa inethiwekhi yeLinux ngaphandle kokusebenzisa iSamba. Ngamazwana angenabo ubungani, uClaudio ucela ukwakhiwa kwe-GUI ukuze ikwazi ukwenza umsebenzi izinkulungwane (uma kungenjalo izigidi) zabantu eseziwenzile phambilini futhi zizoqhubeka nokuwenza ... njengoba lo msebenzi omningi ungowokududuza, futhi akawuthandi Okuningi kuncamela ukudala i-GUI ukuze ikwazi ukuyisebenzisa kalula (okungenani Windows njengoba esho) inethiwekhi yakhe yangaphakathi. Ake siqale singene kulokhu kancane ngaphambi kwesixazululo.
1 Imodi yebhizinisi vs FOSS
1.1 Inkampani enjalo iphila ngesoftware yayo
1.2 Kwenziwa ukukwenza uncike kuwe
2 Ukubaluleka ngumama wendalo
2.1 Uma wabelana ngamafolda kumawindi wenza izimbobo zokuphepha
3 Ukuqinela abanye akusoze kwaba yisixazululo
4.1 Kungani kubalulekile ukuba nemininingwane eyodwa?
4.2 Angiqambi isibhamu
4.5 Imibhalo Esemthethweni (NgeSpanishi !!)
4.6 Faka iseva neklayenti
4.7 Lungiselela iseva
4.8 Qala kabusha iseva
4.9 Xhuma kuseva
4.10 Vula isiphequluli sakho
5 Imicabango yokugcina
Imodi yebhizinisi vs FOSS
Hhayi-ke, masikugcine kulula kusukela ekuqaleni ... Lokhu kuyinto ehlala ifunwa kumaphrojekthi we-FOSS (Free and Open Source Software), ukungabikho ikhwalithi emsebenzini. Ngihlale ngizwa, kepha kunjalo ukudlala kungcono ukuyithenga enkampanini ithal ngoba kungcono, uhlelo olunjalo kangcono kunenguqulo yayo yamahhala, uhlelo olunjalo kangcono ukwedlula omunye okhululekile. Ake sibone ukuthi kungani lokhu:
Inkampani ithal viva yesoftware yakho
Uma ngiyinkampani futhi umsebenzi wami ukuthengisa isoftware, lokho kusho ukuthi kufanele ngithengise okuthile ngokweqile kuhle ukuze abantu bayithenge, ngakho-ke kufanele akhokhe Konjiniyela bami ukuyithola, futhi lokhu kuyisiqalo salolu daba, isoftware yamahhala futhi kwezinye izimo umthombo ovulekile wenziwa yi umusa. Abantu abakhokhelwa ukuthuthukisa okuthile kwabanye. Ngakho-ke uma ungitshela ukuthi unjani isofthiwe o uhlelo noma yini engcono kunenguqulo yayo yamahhala, ngiyakutshela, mhlawumbe, kepha kunenkinga enkulu kulokho:
Kwenziwa ukukwenza uncike kuwe
Lokhu kufana nomuthi, isoftware ephathelene kakhulu oyisebenzisayo, lapho kuncipha khona ikhono lakho lokucabanga nokuxazulula izinto ngokuzimela. Ake sicabange ngalokhu okwesikhashana, uyazi ukuthi uhola kuphi kakhulu, ngokuthengisa noma ngokulungisa? Impendulo yalokhu ilula, noma ngabe uhlelo noma uhlelo lubiza kangakanani, inzuzo ekulondolozweni iyohlala njalo iba nkulu kunenzuzo ethengiswayo, ngoba ngesikhathi sezinkinga, akunandaba ukuthi inani lemali okumele litshaliwe ukulixazulula ngoba kalula ngeke shintsha ingqalasizinda ngaleso sikhathi.
Ukubaluleka ngumama wendalo
Indlela engenabungani yokucela i-GUI ayisona isizathu esanele sokwenza, futhi ngasikhathi sinye, ngiyaxolisa uma kuzwisa uClaudio ubuhlungu, kepha nginezinto ezibaluleke kakhulu okufanele ngizenze namaphrojekthi okufanele ngibambe iqhaza kuwo ukuze ngisebenzise isikhathi sami ekuxazululeni ukungabi bikho kwakho ukuzimela nokudlula kwakho kwengqondo. Kepha njengoba ubuze, kulungile, sizochaza ukuthi kungani engekho ama-GUI okwamanje wento ethile Windows ilula kakhulu.
Uma wabelana ngamafolda kumawindi wenza izimbobo zokuphepha
Lapha abangaphezu koyedwa bazongitshela ukuthi nginephutha nokunye njll ... kepha iqiniso ukuthi lapho usebenzisa nmap Ukubona ikhompyutha yamawindows, mhlawumbe uma ikunethiwekhi "ethembekile", izobe isebenza ngenkonzo ethekwini elithile ukuze ikwazi ukwabelana ngamafayela. Lokhu akuyona nje kuphela ingozi, kepha kuncane kakhulu okwaziwayo ukuthi ukuhlaselwa okuphumelelayo okuningi kuvela ngenxa ye- ukwabelana ukufinyelela ngenethiwekhi. Kepha kungani lokhu kuvela? Hhayi ngoba ifilosofi IWindows ikufundisa ukuthi usho SI ngaphandle kokwazi kahle ukuthi kwenzekani. (Khumbula ukuncika?) Indlela elula yokuxazulula lokhu kungaba ukunakekela imishini, kepha njenge ifilosofi IWindows akuyona leyo, kulapho i- ukugcinwa iyaqala ukusebenza, futhi ikwenze kufanele isidingo womuntu ozokwenzela izinto.
Uma isidingo singumama wendalo, ngaphandle kwesidingo, ngakho-ke akukho lutho. Lokhu kuyinto elula kakhulu ukuyiqonda, uma abantu abayisebenzisayo (imvamisa abaphathi bohlelo, noma abantu abasebenzisa amaseva) bengayidingi, ngeke bayidale. Ezimweni ezikhetheke kakhulu (imvamisa kusoftware yamahhala) abadali bazibeka kancane ezinyaweni zabangenalwazi oluningi futhi banqume usizo ukudala i-GUI (IGit ine-GUI yalabo abafuna ukuyizama), kepha futhi, lokhu kungenxa yokumsulwa umusa yabadali, kusukela inani lomsebenzi real inkulu kakhulu, futhi abathuthukisi bambalwa kakhulu, ukuthi leyo misebenzi yehliselwe kwi isikhathi samahhala kusuka kunjiniyela onenhliziyo enhle. (Khumbula ukuthi akekho okhokhelayo ukukwenza, futhi usenomndeni, umsebenzi kanye nezibopho)
Ukuqinela abanye akusoze kwaba yisixazululo
Thatha lokhu njengeseluleko bese uphawule kubo bonke labo abalifundayo, ngikhumbula kakhulu ividiyo engake ngayibona yenhlolokhono no-Obama (umuntu engimthatha njengesibonelo esihle somuntu), lapho indoda ethukuthele iqala khona ukuyigxeka futhi iyithuke futhi ayizange lutho. Akenzanga lutho, hhayi ngoba engakwazi, okungukuthi, wayeyindoda enamandla kunabo bonke emhlabeni ngaleso sikhathi, kodwa ngoba wayazi ukuthi akufanele azithobe aye kulelo zinga. Lokho akusona futhi ngeke kube yisixazululo kulokhu kuphila, ukungena engxabanweni akusoze kwaletha noma yini enhle, kunabantu abangakholelwa ukuthi kuyenzeka, kepha okungenani ukwesatshiswa namazwana we-X ngeke kungishukumise. Ngikushiye njengokuphawula okuxekethile ngaphambi kokuqala okokufundisa.
Uhlelo lwefayela lenethiwekhi umthetho olandelwayo wezinga lokufaka isicelo onikezela ngolwazi eyodwa y kuvumelanisiwe kunethiwekhi, kusebenza zombili izinhlelo zeLinux ezinjengeWindows nezinye (lokhu kungenxa yokuthi yenzelwe Izinga lokufaka isicelo). Sikhuluma kanjani kangaka eyodwa, kusho ukuthi sibhekene nesisombululo semodeli yeKlayenti / Server. Sesivele sikuthinte ngokukha phezulu komunye umzuzu, kepha akukho okunye ukugcizelela imininingwane encane.
Kungani kubalulekile ukuba nemininingwane eyodwa?
Omunye umuntu uzothi, «kepha nginolwazi olubalulekile ngohlobo ngalunye lomshini enginalo, ilaptop yami yokusebenza, ikhompyutha yami yasekhaya, njll. Inkinga yilokhu okulandelayo, uma ngabe kulandelwa imodeli yokulondoloza efanele, umuntu ubengabona ukuthi ukudala nokugcina izipele zamaphoyinti amaningi kuyinkimbinkimbi, kulula kakhulu (kithina sonke esisebenzisa imibhalo nabanye) ukudala iphuzu elilodwa lapho ulwazi lufika khona futhi ukusuka lapho qala ukuvikela imininingwane. Ngaphezu kokuba izinhlobo eziningi ngamaphuzu ahlukene akwenzi nje kube nzima ukulandela imininingwane, kodwa futhi kwenza umsebenzi ube nzima.
Kulabo okwesikhashana abakholelwa ukuthi ngithole lokhu ngokuzama nangephutha, ngoba akukho okuqhubekayo eqinisweni, ngisebenzisa okuncane nje lokho i-Google enginikeza kona futhi ake ngibone engikuthole ekusesheni kokuqala (ngizocabanga ukuthi bakwi-Ubuntu labo abayisebenzisayo, futhi ngicabanga ukuthi kuFedora ushintsho kufanele lube lincane)
Hlala ulandela lokho elikushoyo Oficial. Lesi mhlawumbe esinye sezinyathelo zokuqala okufanele zilandelwe, futhi ngikubeka uma kwenzeka noma ngubani ecabanga ukuthi kukhona engikwaziyo ngeNFS ngaphambi kokubhala lokhu okuthunyelwe.
Kude kakhulu; ungafundi. Njalo lapho bebona lesi sifinyezo, bangaba nesiqiniseko esingu-100% ukuthi kuyindlela "yobuvila" yokuxazulula inkinga, abaningi bazobanga ukuthi bangazi kanjani ukuthi ngabe ngesiNgisi, kahle, manje sebeyazi ukuze kungabi bikho ndlela yokufuna kamuva 😉 Ngisebenzisa i-dicciontary yasemadolobheni kakhulu ukuqonda okuningi kwale mibono.
Imibhalo Esemthethweni (NgeSpanishi !!)
Umphefumulo othile onenhliziyo enhle uthathe umsebenzi wokusihumushela leli khasi elilula kodwa eliphelele ngakho konke okudingekayo ukufaka iseva yeNFS kunethiwekhi yethu.
Sizobona ngokushesha izinyathelo okufanele zilandelwe. Ngikushiya i- isixhumanisi kulabo abafuna ukwazi abangakwazi ukusebenzisa iGoogle ngezizathu ze-X ukufika endaweni efanayo.
Faka iseva neklayenti
Manje sizofaka ngekhonsoli okudingekayo kuzo zombili izindawo ukusebenzisa amafayela abiwe. Esiphakelini sifaka nfs-kernel-server nakukhasimende nfs-common
I-NFS isebenza ngefayela lokumisa elitholakala ku- /etc/exports. Leli fayela litshela abakwaNFS ukuthi yimaphi amafayela okufanele babelane ngawo nokuthi uwabiza kanjani, ngaphezu kokuba nezibonelo ezinhle kakhulu zokuthi uzisebenzisa kanjani ngokuzenzakalela, sizosebenzisa ukududuza ukuyihlela ngenxa yokwethenjelwa njalo vim (labo abangakhululekile nge-vim bangasebenzisa nano)
Ngalesi sibonelo esilula ngitshela okuthunyelwa ngaphandle ukuthi ngifuna ukwabelana ngefolda yami workspace ( * kubonisa ukuthi ngifuna ukwabelana ngakho konke okuqukethwe futhi ngaphandle kokushiya isikhala ngibhala izimvume nezinketho ezingifanela kahle, kuleli cala rw yokubhala nokufunda)
Qala kabusha iseva
Uma silungiselele kahle, sidinga ukuqala kabusha isiphakeli (noma siyiqale uma singasebenzi), akudingekile ngaso sonke isikhathi uma kukhona ushintsho, kepha ngithatha ithuba ukukucacisa, uma ungafuni ukuqala kabusha konke, okulula exportfs -ra xazulula inkinga.
Ulayini wokuqala systemctl start nfs-kernel-server yenza iseva isebenze, eyesibili ukuqiniseka nje ukuthi konke kulungile (uma kungenjalo kuluhlaza, akulungile).
Manje sizoxhuma enye imishini yethu, lapho sizosebenzisa i- ukududuza, nomyalo mount.
Nakhu kufanele ukugcizelele ukuthi ama-IP abelwe ukuthanda kwakho, angazi noma bazosebenzisa i-DHCP noma i-manual, kepha uma sebene-IP bangayisebenzisa, bayangeza : / path / of / your / folder nendawo lapho ungafaka khona ukuxhumana, kimi ngakha ifolda ebizwa ngokuthi compartido.
Vula isiphequluli sakho
Lapha bobabili basenguqulweni ukududuza njengakwinguqulo I-GUI. Futhi ngikukhombisa kancane ukuthi ngenza kanjani umsebenzi wami esikhungweni, ngihlala ngisebenzisa imishini ebonakalayo ukusebenzela imininingwane yezifundo, (yingakho bezobona i-OSX ifakiwe) kanye nolimi ngalunye, ukuze ngibe nezindawo ezilawulwayo zentuthuko futhi ungagcwalisi iGentoo yami ngezinhlelo ezingadingekile. Kungani ubuntu? kahle ngiyithanda kakhulu kune- Fedora futhi kuyashesha ukudala imishini yokuhlola engingayisula ngokushesha futhi. Njengoba ngishilo 🙂 wonke umuntu ulandela ifilosofi yakhe futhi ashiye konke kulungele sebenzisa ngaphandle kokucabanga okuningi Kuyinto eyenza ubuntu bube lula kakhulu kubasebenzisi bayo 🙂 (ngaphezu kwalokho, ngenze isitifiketi sokuphatha uhlelo lwami ku-Ubuntu (i-LFCS ikuvumela ukuthi uyinikeze imindeni emithathu emikhulu yezinhlelo: Ubuntu (Debian), CentOS (Red Hat) kanye ne-SUSE (SUSE) )), ngakho-ke bekuyindlela enhle yokukhumbula apt-get y apt)
Sengivele ngibhale okuningi kulokhu, kepha njengoba ubona uClaudio, yizinyathelo ezi-4 kuphela (ngiyethemba ungazenzela iGoogle yodwa ukuze ungabala), futhi uqagele ukuthi… awudingi i-GUI ngemiyalo emihlanu. Uxolo uma ngingenakukwazi ukufeza isifiso sakho sokwenza umhlaba ube yi-GNU / Linux kanye neWindows, futhi sikuvikele ekucabangeni kancane nasekufundeni i-google izinto. Futhi uma ufuna ukuba nezinguquko unomphela kunethiwekhi yakho nemishini ngokusebenzisa /etc/fstabKuzofanele uzitholele wena.
Kubo bonke abanye abantu, ngicela ungithethelele uma ngike ngadelela ngalokhu okuthunyelwe, futhi noma ngikubhalele ukungathathi hlangothi (kufanele ngivume ukuthi akekho umuntu othanda ukubuzwa umsebenzi nomzamo wakhe, ngisho nangaphansi kokubizwa i-swagger) Ngiyethemba ukuthi lokhu kungasiza ngaphezu kweyodwa emsebenzini wabo wokuxhuma. Ngiyabonga kakhulu ngokufika lapha yize benginamahloni namaphutha, Sanibonani 🙂
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungawabelana kanjani amafayela kunethiwekhi yeLinux
Miguel Mayol i Tur kusho
Ngilandele izinyathelo zeManjaro (Arch) emuva osukwini futhi azange zingisebenzele (ngabelana neSamba) nama-plugins abelana ngeThunar naseNautilus
Ngokuphathelene "nokufaka iwindi", ngicabanga ukuthi i-KISS yi-FLOSS ayifanele. Ku-MS WOS kunezinto eziyinkimbinkimbi okufanele zenziwe, futhi noma kunjalo akubonakali kukuhle kumsebenzisi.
Kungani unganikeli iskripthi noma i-meta-package efaka futhi ilungiselele i-NFS esikhundleni sokukopisha nokunamathisela imiyalo emi-5?
Ababaningi kangako abalinga okwangaphambili, ingasaphathwa eyokugcina
Futhi uma sifaka i-plugin yesabelo seNFS eThunar kanye / noma eNautilus (noma abanye) kangcono kwiFLOSS neKISS, noma cha?
Futhi angibhali ukuthi kungumsebenzi wakho wesikole, kepha ngingajabula uma othile engakwenza (weSamba nayo yerekhodi) futhi ayisebenzise njengethuluzi "lokuguqula" abantu libe yi-GNU / Linux ekhombisa ukuthi kulula kanjani ukwaba ifolda ngeNFS (noma Samba) ukuyisebenzisa kusuka ku-Smart TV ne-Kodi
Phendula uMiguel Mayol i Tur
U-Octavio Sanchez kusho
Kungani ungazami ukukwenza ngokwakho? Lokho wukuthi, uma ucabanga ukuthi kudingekile futhi kuyasebenziseka ku-FLOSS ne-KISS, qhubeka uhlanganyele nomphakathi ngaleyo ndlela.
Phendula u-Octavio Sánchez
Ngintula lolo lwazi, izinhlelo.
Ngakolunye uhlangothi, zibalulekile kulabo abanazo futhi bafuna ukwenza kanjalo.
Futhi uma ungumfundi wesayensi yamakhompyutha ofuna ukukhombisa into enjalo kwi-CV yakho, kungcono.
Mayelana nalokho okwangisebenzela, ukukwenza neSAMBA sengivele ngishicilele isifundo esifingqiwe esithangamini seManjaro salabo abangasizakala ngaso https://forum.manjaro.org/t/suggestion-samba-and-or-nfs-shares-and-plugins-easy-by-default/34169/4
RAFAEL PRESILLA kusho
KUMAKHASIMENDE AHLANGABEZAYO NASISEKELWE, SIYISHIYA KANJANI LEZI ZINSIZAKALO EZISEBENZAYO NGOKUPHELELWA?
Phendula kuRAFAEL PRESILLA
Sawubona Rafael, ukuze ukwazi ukubashiya ngokuzenzakalela ngokuqala komshini kuyadingeka ukuhlela ifayela le- / etc / fstab ukuze lixhume ngqo kunethiwekhi, ngoba lokho kukhethekile kakhulu futhi ngicabanga ukuthi ubuza endaweni yebhizinisi, kukhona okunye ukucatshangelwa kwezokuphepha okufana nezimvume namagama wokufinyelela, amaphuzu wokufinyelela, izingodo, phakathi kokunye. Sanibonani
UCarlos Diaz kusho
Yebo, ngiyaqala kulo mhlaba we-linux, futhi ngifunde konke okushicilele muva nje, angiwuqondi umongo wokuthunyelwe kwakho futhi ngiqonde ukuthi impi onayo noClaudio, kepha ngisazisa kakhulu isikhathi osichitha uzibhala manje yabelana ngolwazi lwakho, okuncane kakhulu esingakwenza ongakukhokheli, ukukufundela ngenhlonipho! Ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakuhalalisela ngobuqotho ngalo msebenzi oncomekayo.
Phendula uCarlos Diaz
Sawubona Carlos, nasi isixhumanisi somongo
Akuyona impi engaka, lokho kungasho ukuthi ngithemba ukuqhubeka nodaba, kepha ngemuva kokufunda umongo ngiyethemba ungasiqonda isizathu somoya wami omubi, noma kungenjalo mhlawumbe ngibe nehaba isimo, kuzo zombili izimo akusikho into engihlose ukuqhubeka ngiyenza 🙂
Futhi ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho, empeleni kungenxa yamazwana afana nalawa engijabule ukuwabhala futhi mhlawumbe ngihlanganyele isikhathi esihle nani nonke nifunda lezi zikhala reet Sanibonani
Ngokuthunyelwe konke kuhamba kahle, engingakwenzi »ukwabelana» nakancane ukuthi u-OBAMA NGUMUNTU OHLE !!!!! omunye wabadubuli ABAKHULU KAKHULU EMLANDWENI KANYE NE-ISRAEL…. Ukwabelana ngefolda kuba yinto encane yolwazi ngemuva kokufunda i-ESO.
Kudala ngisebenzisa iLinux futhi ngiyincoma kubangani bami abasebenzisa iLinux, kepha ngicela, into ka-Obama inamandla kakhulu.
Sawubona Ivan, ngiyabonga ngokuthatha isikhathi sakho ukuphawula nokwabelana. Ngicabanga ukuthi u-Obama engikucabangayo (futhi kuyinto yomuntu siqu, ungabelana ngayo noma cha, kepha kufanelekile ukucaciswa lapha) ngezinto ezifana lokhu:
Kulabo asebevele bafunda okunye okuthunyelwe yimina, kokubili lapha nakwezinye izindawo, uzokwazi ukuthi angiyena umuntu "wezepolitiki" ngomqondo wokuthi ngikwazi lokhu, futhi empeleni lokho kungenye yezinkinga engingazikhathaleli kangako. Ngithanda ukuzama, kepha kufanele ngikwenze lapho kudingeka. Njengoba uTrump ngokwakhe asho ngemuva nje kokuba ngumongameli ... "lokhu kunzima kakhulu kunalokho ebengikucabanga" ... sesivele sixoxile ukuthi kukhona abamnyama, abamhlophe kanye nezithunzi, kepha ngicabanga ukuthi indlela yangempela yokubabona ukuthi bazi WONKE umongo ... futhi leyo nto ezinqumweni zezombusazwe eziyinkimbinkimbi ngenxa yobuningi bolwazi.
Uma ngithi ngimbheka njengomuntu olungile, kuncike ezimfanelweni ezinhle zobuholi azikhombisile sonke isikhathi sakhe esehhovisi lomphakathi, angisho ukuthi uphelele ngayo yonke indlela, kodwa unezimfanelo eziningi ezifanele ukuba walingisa. Ngiyethemba ukuthi lokhu kukwazile ukwenza isihloko sicace kancane.
Wena eTaringa ungasangana.
Noma ngingavele ngiyishiye kungekudala ngemuva kokuhlonishwa 🙂
carlos zevallos kusho
I-Samba kimi ihlangabezana nazo zonke izidingo zami, njengamanje ngiyisebenzisa kwinethiwekhi yebhizinisi enabasebenzisi namaqembu futhi nginezimvume kumafolda athile ngokususelwa kuphrofayili yomsebenzisi, ngenza kahle kakhulu futhi nginamakhasimende we-windows ne-linux
Phendula ku-carlos zevallos
Yebo, iqiniso liwukuthi, angikaze ngingene ezweni lokuhlanganiswa kwe-windows-linux kakhulu, futhi kungenza ngibe nelukuluku lokwazi, kepha kuhle ukuthi uyayithanda futhi kwazi bani, uma ungalokotha ubhale i-athikili ngakho 😉 imikhonzo 🙂
UCarlos, uSamba muhle kakhulu ukuhlanganyela kunethiwekhi yeWindows-Linux, kepha inkinga ukuthi unenethiwekhi ye-LAN kuphela neLinux. ISamba ayisebenzi kuleli cala futhi kufanele wenze zonke izinyathelo ezichazwe yiChrisADR.
Angikayisebenzisi, kepha njengoba ngifunda enetheni:
ungafaka iseva ye-samba ku-linux ngakho-ke akudingekile ukuthi kube khona amawindi wokuyisebenzisa kunethiwekhi.
Kwesinye isayithi: https://www.driverlandia.com/instalar-samba-para-compartir-carpetas-en-linux-debian/
Ngiyabona ukuthi njengoba i-Win7 kungaba nezinkinga nge-password, kepha izothinta kuphela amaklayenti we-win7,8,10 hhayi amaklayenti we-linux azosebenzisa iseva ye-samba ene-linux.
I-openuse yast inemodyuli ye-nfs, angazi nakancane ngalezi zinkinga, ngaphezu kwalokho, ku-manjaro yami ngelinye ilanga ngakhipha amaphakheji we-nfs ngoba angiwasebenzisi nhlobo, njalo lapho ngifunda okuthe xaxa ngisusa izinto kuwo ekudleni kwami ​​okumnandi engikutholayo ukuthi abangisebenzeli nakancane, futhi kancane kancane kudla i-RAM encane, ngicabanga ukuthi ama-distros alula kufanele abe nezinto ezingaphansi ezifakiwe, ngiyabona ukuthi baphatha izinto eziningi umuntu oqalayo angazi nokuthi ziyini, nakanjani ukuthi uma umbhali wokuthunyelwe engifaka i-gentoo, usazofaka amaphakheji angaphansi kuka-200 futhi enze konke engikwenzayo nge-manjaro, kuze kube ngenxa yokungazi kwami ​​i-gentoo yaphuka impela.
Ekugcineni, ngale ndaba, kufanele sikhombise okushiwo nguRichard Staliman kaningi isoftware yamahhala akusho ukuthi kufanele ibe mahhala, ngicabanga ukuthi emphakathini wanamuhla sizijwayeza ukukhokhela i-smartphone egcwele isoftware ephathelene nokuthi asazi konke ekwenzayo futhi esikhundleni salokho sifuna isoftware yamahhala eyenza konke kube lula ngathi futhi imahhala, kufanele futhi sijwayele ukucabanga kancane nokusesha esimweni salokhu okuthunyelwe angazi nakancane ngama-nfs kepha ngibonile ukuthi okungenani ku-openuse kunemodyuli yokuqhafaza yalokhu , Angazi noma kuzoba kuhle noma kubi.
IManjaro inhle futhi ayisheshisi kangako kuneGentoo.
Kepha uma ufuna ukuzama uGentoo (nami) ngincoma iSabayon.
I-Gentoo efakwe kuqala futhi elula, okuncane kakhulu noma okuncane ukuthi iManjaro to Arch iyini.
NgineSabayon emshinini obonakalayo futhi kunomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwesabayon ne-gentoo kunaphakathi kwe-manjaro ne-archlinux, i-sabayon isebenzisa i-entropy njengomphathi omkhulu wephakeji (i-equo on console futhi eqinile kugrafu) okungamaphakheji kanambambili, inezindawo kodwa angazi Ncoma ukuyisebenzisa kakhulu. I-Manjaro ne-arch inomphathi wephakeji ofanayo, shintsha ukuthi vele ku-manjaro usufake okuningi nokulungiselelwa kanye nendawo yokugcina izinto, i-gentoo esikhundleni salokho ukusebenzisa i-portage ukuhlanganisa nezinketho ezivela kukhodi ye-guente, siwumehluko omkhulu ne-sabayon ekunika amanye amaphakheji lokho kuvela ku-gentoo kepha ngezinketho ezijwayelekile.
Esikhathini esingengakanani edlule nami bengibhekene nalezi zingqinamba, lapho umuntu eqala nje eLinux kuyakhathaza ukungatholi izixazululo ezisheshayo noma izinhlelo zokusebenza okufanele zibe nezinqubo ezisebenzayo futhi ezingezona ezinzima. Ngiyabahlonipha futhi ngiyababonga abathuthukisi abathatha isikhathi sabo, futhi abathanda ukwenza umsebenzi wabo kahle, bangifundisile uma umuntu enza okuthile mahhala noma kungafanele kwenziwe kahle ngoba kukhona okuphethe isitembu sakhe. Kepha kukhona ukweqisa. I-Linux iyathandwa ngoba ingxenye enkulu kuyadida ukwenza izinqubo nokufaka imisebenzi nakho konke ngabathuthukisi abathi, bekwazi ukuthuthukisa umsebenzi wabo, bayishiye ikhukhuleke ngokuya ngemiyalo emide yokugcina. Okunye okweqile ukuthi kunabasebenzisi abaya ngaphezulu kwamakhanda abo ngenxa yobuvila noma ikhefu lengqondo abafuna ukuthi umuntu abenzele konke.
Sawubona Ismael, ngiyabonga ngokwabelana futhi bengifuna nje ukugcizelela izinto ezimbalwa ... I-UNIX isebenzisa ifilosofi ecace bha ekwakhiweni kwezinhlelo "yenza into eyodwa, futhi uyenze kahle kakhulu", ngenxa yalokhu ziningi izinhlelo ezenza into eyodwa, futhi lokho Kuyadingeka ukuthi ujoyine amaningana ukuze ukwazi ukuxazulula izimo "eziyinkimbinkimbi". Angiphiki ukuthi kunezinhlelo ezimbalwa ezingaba ngcono, kepha okungenani ngaphansi kwakho konke, angikaze ngibhekane nokushoda komqondo ezinhlelweni ezibalulekile ze-GNU noma i-kernel. Kuyadabukisa ukuthi umbono omubi kanjena wenziwa uhlelo lwezikhathi ezithile olucatshangwa kabi.
NGIYABONGA Mngani uChrisADR, kusobala ukuthi wazi okuningi ngeyakho, ngiyakuhalalisela futhi ngiyaxolisa uma benginokhahlo ekuphawuleni kwami ​​kwangaphambilini, kokukhishwa kwe-terminal noma kwe-gui. Kepha ngalokhu okuthunyelwe, usanda kuqinisekisa engikugcina ukufuna ku-linux, indlela elula yokwabelana ngamafolda ku-Linux LAN Network futhi njengoba uchaza kahle kulokhu okuthunyelwe okuhle kakhulu, kuyisidina kimi njengomsebenzisi, ukwenza izinyathelo eziningi esigungwini ukuze ukwazi ukwabelana ngamafolda kunethiwekhi ye-Linux lan. Ngiyaphinda, ngiyabonga ngalokhu okuthunyelwe futhi kuzosiza abaningi, hhayi kimi, ngeshwa. Ngilindele okuningi okuningi kusuka ku-linux. Okwamanje, kuzofanele ngiqhubeke nokusebenzisa iGuindous kumanethiwekhi wami we-LAN. Futhi, encwadini yami yokubhalela, ngiyaqhubeka nesithandwa sami iMX Linux.
Isixazululo esilula kakhulu engivame ukuphendukela kuso ukufeza lokho okufunayo ukusisebenzisa https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell_Filesystem y https://es.wikipedia.org/wiki/Files_transferred_over_shell_protocol.
Sawubona Claudio 🙂 Ngiyabonga kakhulu ngokuninika isikhathi sokwabelana, futhi ngiyabonga ngokuxolisa kwenu, ningixolele nami uma ngike ngadelela endaweni ethile. Nokho, yize lokhu ongitshela khona kulihlazo, nginesiphakamiso ngawe; Njengoba kungaba umsebenzi owusizo futhi okungaphezu kokukodwa kubonakala kunentshisekelo, singacela iphrojekthi ukuthi ikwenze njengesiphakamiso sokwenza ngcono personally Mina ngokwami ​​anginaso isikhathi noma indawo yokwenza lonke uhlelo kusukela ekuqaleni, kepha mhlawumbe ozakwethu kusuka ku-Nautilus (i-GNOME) noma i-Dolphin (i-Plasma) ingaba nayo kuhlu lwezinto okufanele zenziwe kuze kube yilapho omunye unjiniyela esakwazi ukuthenga isikhathi, futhi mhlawumbe akwenze ngokushesha okukhulu kunami :)
Uma uwuthanda lo mbono, singabona ndawonye ukuthi singasishicilela kanjani futhi kuphi isiphakamiso sokwenza ngcono, owaziyo futhi mhlawumbe okufana nakho sekuvele kuphekwa kwenye indawo 🙂 Sanibonani
Ngafaka iSyncthing futhi angibange ngisaba nezinkinga. Nginikela lapha njengenye indlela.
Sawubona, ngiyavuma ukuthi njengoba uChrisADR ekule bhulogi ngilinde elandelayo, funda nje kuyo, ngiyabonga ngalokho, ngenye indlela bese ulandela elinye lamaphuzu okuthunyelwe.
Umongo ukuthi kufanele ngikopishe amanye amafayela kuma-ATM bese ngiwahambisa kwiseva (i-GNU / LINUX), ngisebenza ohlelweni lokulondoloza, kepha nginombandela wokuthi ngisebenza nama-ATM (ama-ATM) futhi angikwazi ukuvula noma yimaphi amachweba, anginayo nensizakalo yokudlulisa ifayela le-windows network, angikwazi ukusebenzisa i-ftp. Anginawo nje amathuluzi alokho, icace kakhulu insiza futhi alikho ithuluzi layo.
Kepha ngiyazi ukuthi kukhona okufana ne-SSH ne-SCP nokuthi ngokuhlangene bangamathuluzi aphephe kakhulu kuze kufike lapho, kodwa ngiyifaka kanjani i-SSH emafasiteleni? hhayi uhlelo olungivumela ukuthi ngisebenzise umthetho olandelwayo, ngidinga okuthile okuhlukahluka kakhulu, ngidinga okuthile okunesixhumi esibonakalayo se-CLI, kusobala ukuthi angazi lutho, ngenkathi ngicwaninga ngithole umtapo wolwazi we-python ovumela ukuthi usebenzise izinqubo ezihlukile zenethiwekhi futhi wenze ucwaningo lokuthi lusebenza kanjani, manje Nginohlelo olusebenzayo, lapho engingasebenzisi khona i-samba noma i-SFN kepha ngikwazi ukudlulisa amafayela ngisebenzisa umthetho olandelwayo ophephile.
Lapho ngifuna ukufika nalokhu ukuthi ngokwazi i-python nokwazi ukuthi kukhona okukhona (ssh), qedela umsebenzi owunikiwe, ukube bengingomunye umuntu ebengizothi, lokho akunakwenzeka, ngidinga ukunika amandla amachweba noma ukwenza kusebenze windows windows noma lokho alikho ithuluzi elingivumela lokho.
Futhi akuqhubeki nodaba, kepha uma ungibuza ukuthi kungani ngithanda i-CLI kune-GUI, i-CLI iyaphinda isebenze futhi lokho kuyinika amandla amakhulu kakhulu phezu kwegrafu. Ithuluzi le-CLI lingasetshenziswa ezinye izinhlelo (ukugoqa) igrafu ihloselwe umsebenzisi kuphela.
Sawubona 🙂 Ngiyabonga kakhulu ngalokho okushoyo, futhi ngiyabonga ngokwabelana ngolwazi lwakho.
Njengoba ushilo, ama-CLI afana nomlingo ngemuva kwezigcawu, awaziwa ngaso sonke isikhathi, kodwa ngaphandle kwawo okuningi kwalokho okungabonakala (i-GUI) bekungeke kusebenze nhlobo.
U-Arturo J. Ducoing O. kusho
Ungalilahli ithemba, khumbula ukuthi umsebenzisi weWindows ukhetheke kakhulu futhi kuze kube yilapho lolu hlelo lonakalisa ubukhona babo lapho kwesinye isikhathi beqala ukungabaza usizo lwayo, bese bebuyele ukuzolisebenzisa.
Abasebenzisi beWindows bangamabutho, futhi abanye banedemoni kakhulu kunabanye, futhi abajwayele ukufunda imibhalo, yingakho lapho ubayisa endaweni ye-GNU / Linux bahlupheka kakhulu.
Ngisebenzisa imininingwane yakho kakhulu, ngiyabonga ngokwabelana.
Phendula u-Arturo J. Ducoing O.
eurekaaaa, ngigcine sengikutholile ebengikudinga, "umthombo ovulekile uthuthukiswa ngentando enhle." Lokho kucacile futhi kuyancomeka kakhulu, futhi kuyabonakala ukuthi kukhona umuntu owayenesidingo esifanayo nami futhi wakhula (noma wabelana) ngangingakwazi ukufunda konke, isixazululo engangisifuna kakhulu. Futhi yebo, ngokuzithandela, "wabelana" futhi ngiyabonga kakhulu. Kepha njengoba isingeniso salokhu okuthunyelwe sisho, "kufanele ubize izixazululo ezinhle", kusobala ukuthi ngeke ngikhokhise, kepha angizukubeka isixhumanisi lapho ngithole khona isixazululo, ngoba isikhathi sami sibiza kakhulu, angikhokhisi kepha ... kuthathe isikhathi ukuthola. Ngingabeka kuphela labo abanentshisekelo futhi abanokukhathazeka okufanayo, ukuthi ungakuthola ku-yuotube. 🙂
AmaRams Castaway kusho
Kulula kanjani ukuthi "sifune" isixazululo bese kuthi othile azinike isikhathi sokukuchazela kabanzi ngaphandle kokukukhokhisa lutho. UChrisADR (engingamazi) akazange akhokhise ngisho indibilishi yalokho, kepha wena ngobugovu uthi uthole isisetshenziswa omunye umuntu, ongenzi nzuzo, abelane ngaso, futhi wenqaba ukunikeza isixhumanisi (by the way, no need). Angazi ukuthi ungubani futhi, kepha ngiyabona ukuthi isimo sakho sengqondo sishiya sifiseleka kakhulu. Khumbula ukuthi lezo "zixazululo ezinhle (lezo) okumele zikhokhiswe" azenzwanga nguwe nomuntu ozenzile, naye akazange akhokhise. Ngakho-ke lokho kukuguqula ube yisinambuzane (uhlobo lwesidalwa. Ubudlelwano obuseduze lapho omunye wabahlanganyeli (isinambuzane noma umphathi) encike komunye (umphathi noma umphathi) bese ethola inzuzo ethile.) Qaphela: Ngiyakubeka incazelo ukuze ungabi nankinga yokuyifuna, ngoba isikhathi sakho sibiza kakhulu.
Phendula uRams Castaway
Kusobala ukuthi kufanele ube nobubi obuthile ekhanda lakho, ngoba uzuza nsuku zonke kulwazi abantu abalubeka lapha ngokuzithandela futhi uma "ngokusho" uthola okuthile okufanelekile wenqaba ukukuhlanganyela, ukugwema lokhu i-akhawunti yakho iyahamba Ukuze ikhanselwe, i-IP yakho ivinjelwe futhi kuzodingeka ukuthi wenze izibuyekezo eziqhubekayo ukuze ungakwazi ukufaka kabusha i-FromLinux ngoba uma lo mphakathi unokuthile, ungowabantu, hhayi owezinambuzane.
U-Ernesto Iglesias kusho
Okokuqala ngiyabonga ngokuthunyelwe, kube wusizo olukhulu, yize kungelula njengoba bebefuna ukukupenda, kuseshwa kakhulu. Kodwa-ke, ngikuthola kucasula kakhulu futhi kungenayo indawo konke ukwethulwa namazwana angahlangene nenkinga, uma kungenjalo umbhali ubengafuni ukuphendula kangcono, omunye umuntu ubengayiphendula futhi bekungadingeki ayibize ngokuthi ngumSamariya Omuhle ngemuva kokukhokhisa imininingwane ngamacala. . Noma kunjalo, ngiyabonga. Ukuthi bayakhokhisa noma cha, noma uma benza konke "ngenxa yothando lwabanye" akusona isizathu sokwenza izinto "ngamahhafu" naku "Google omunye umuntu", ngoba akusibo bonke abantu okumele bazi konke noma "bakopishe futhi ukunamathela »amakhodi kusho ukusebenzisa ikhanda lakho noma ukuqonda noma yini. Sanibonani nonke futhi ekuseni
Engikufunayo ukufaka ifolda ku-hard drive ye-NTFS engiyizuze njengefa kuWindows. Ngiyakwazi ukuyifinyelela futhi ngiyibhalele ngisemshinini wami omkhulu kodwa angikwazi ukuyifaka kukhompuyutha ephathekayo njengoba ngifake zombili iseva yeNFS emshinini omkhulu neklayenti elikwi-laptop. Ngizamile konke kodwa alikho icala.
Thumela ubuqili obungakwenzi lokho okuthembisayo.
Inyanga yethu yokuqala sindawonye :)
Izimpi ezingcwele: Enye yezinkinga ezinkulu * i-NIX